यस्तो छ पाठेघर बाहिर बच्चा बस्नुकाे कारण ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
यस्तो छ पाठेघर बाहिर बच्चा बस्नुकाे कारण !
गर्भ पाठेघरभित्र बसेको छ छैन भन्ने कुरा गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन जानुपर्छ र बच्चाकाे समेत उनीहरुले परिक्षण गराउनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा बच्चा पाठेघरमा नबसी पाठेघरबाहिर बसिदिन्छ । जो आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि निकै खतरा हाे । समान्यतया बच्चा पाठेघरमा हुर्किन्छ । तर, पाठेघरमा नबसी पाठेघरबाहिर बच्चा बस्यो भने यो जोखिमयुक्त हुन्छ । पाठेघरबाहिर फ्यालोपियन ट्युब हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा पाठेघरबाहिर बस्ने बच्चा यही ट्युबमा बस्नेगर्छ ।
यो अवस्था किन खतरनाक हुन्छ त ? यसबारे जान्नुहाेस्ः
किन पाठेघर बाहिर बस्छ त बच्चा ?
पाठेघरको पहिला संक्रमण भएर ट्युबमा क्षति भएमा । . कपर टीको प्रयोग गरेको भएमा । . ट्युबको पहिला शल्यक्रिया भएमा . बाँझोपनको उपचारबाट गर्भ रहेमा ।
पहिले पनि पाठेघर बाहिर गर्भ रहेको भएमा ।
महिलाहरूको गर्भावस्था आफैँमा जटिल प्रक्रिया हुने भएकाले यसबारे निकै सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । किनभने एउटा गर्भ रहँदा त्यहा आमा र बच्चा गरी दुई जीवनको सवाल हुन्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा कम्तीमा ३ पटक (हरेक तीन महिनाको अन्तरालमा) चिकित्सकलाई देखाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ छिटोछिटो खाना खाँदा राम्ररी पच्न पाउँदैन र ग्यास बन्ने समस्या आइलाग्छ ।खाना खाँदा आरामले चपाएर खानुस् अनि बिस्तारै पच्न दिनुस् । खाना खाँदा गफ नगर्नुस् । मैदाबाट बनेका कुरा, जंक फूड अनि बाहिरबाट तारेको खानेकुरा नखानुस् ।सन्तुलित आहार लिनुस् अनि दिनको आधी घन्टा व्यायाम गर्नुस्। एजेन्सी